Ụdị Anya Chineke - Atụmatụ Echiche Echiche
1. Anya Chineke na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị ala na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown na-ahụ n'anya Chineke Anya na ogwe aka ha; ihe eji egbu egbu a na-acha anụnụ anụnụ na agba aja na-acha akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
2. Anya Chineke maka igbu mmadu ndi mmadu nwere ihe eji agba aja aja na-eme ka ha di ebube
Ndị ikom chọrọ ịma ihe magburu onwe ha ga-ahụ Ụdị Anya Chineke na ogwe aka ala na-eji ejiji ink
3. Anya Chineke na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ Anya nke Chineke Ụdị na ogwe aka ha na-eji oji ink dee ya; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
4. Anya Chineke na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka aka elu na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown na-ahụ n'anya Chineke Anya na azụ azụ; Ejiji egbu egbu a na-acha odo odo na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
5. Anya nke Chineke Ụdị echiche igbu egbu na-eme ka nwoke dị jụụ
Ndị mmadụ na-ahụ Anya nke Chineke Aka na aka dị ka ọ na-eme ka ha yie onyinyo na foxy
6. Ụdị ihu ọchị nke Chineke na-eme ka nwoke dị mma
Ndị ikom Brown ga-aga maka akara ngosi onk nke nwa ojiji nke Anya Chineke na aka ha; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya na-atụ egwu
7. Anya Chineke maka igbu mmadu ndi mmadu nwere ihe omimi ink na-eme ka mmadu mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị maka Ụdị Anya Chineke n'elu bicep na ejiji ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
8. Anya Chineke na-egbuke egbuke na-eme ka mmadụ nwee ihu ọchị
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe Ụdị Anya Chineke n'elu ha. Eche egbu egbu a na-egosi ọdịdị anụ ọhịa ha.
9. Anya nke Chineke Ụdị na ogwe aka dị elu na-eme ka ụmụ nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ Anya Chineke na-egbu egbu n'elu ogwe aka elu iji gosipụta ọdịdị dị mma
10. Anya Chineke na-egbu egbu n'elu ogwe aka ala ala na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown na-ahụ n'anya Chineke Anya na azụ ha; ihe eji egbu egbu a na-acha odo odo na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
11. Anya nke Chineke Ụdị na aka na-eme ka nwoke dị mma
Ndị ikom Brown ga-aga maka nkedo ink na-acha aja aja Anya Anya Chineke na aka ha; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya na-atụ egwu
12. Anya nke Chineke Ụdị na-ekpe aka ekpe na-eme ka mmadụ nwee anya igwe
Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga maka Ụdị Anya Chineke na ogwe aka ekpe iji weta anya ha
13. Anya Chineke na-egbu egbu na ejiji onk na-acha anwụrụ ojii n'elu ogwe aka dị ala na-egosi anya ha
Ndị mmadụ na-ahụ Ụdị Anya Chineke anya na mkpịsị ink nke oji na ogwe aka nke aka. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
14. Anya nke icho mma nke Chineke Echiche echiche maka umu nwoke
Ndị mmadụ ga-ahụ Ụdị Anya Chineke na ụkwụ ha na ejiji ink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya ha dị elu
15. Ndị mmadụ na-eme ka Anya Chineke na-egbu ha n'ubu ha ka ha mara ya
Ndị mmadụ na-eme Ụdị Anya Chineke na ubu ya na ejiji ink na-acha aja aja iji mee ka ọ bụrụ ebe ndị mmadụ na-adọrọ mmasị
16. Anya Chineke maka igbu mmadu ndi mmadu na-eji ihe ndi ozo na-eme ka ha di ebube
Ndị mmadụ na-ahụ n'anya Chineke Ụdị maka ndị ikom nwere nhazi ifuru na bicep; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
17. Anya nke Chineke Tattoo na -acha anwụrụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-aga maka akara ngosi ink na-acha anụnụ anụnụ Anya nke Chineke Tattoo na ogwe aka aka ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma maa mma
18. Anya Chineke na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ Anya Chineke Ụdị na ogwe aka ha dị ala; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
19. Ihu Anya Chineke na aka ekpe, mee ka ụmụ nwoke mara mma
Ndị mmadụ ga-eme Ụdị Anya Chineke na ogwe aka ekpe iji dọta uche ndị ọha na eze
20. Anya nke Chineke Ụdị na aka na-eme ka nwoke dị mma
Ndị ikom Brown ga-aga maka epeepe na-acha anụnụ anụnụ na nke ojii na-ahụ anya nke anya Chineke na aka ha; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ anụ ahụ iji mee ka anya na-atụ egwu
21. Anya nke Chineke Ụdị na aka na-eme ka onye ahụ na-ahụ anya na nwoke
Ụmụ nwoke na-acha aja aja na-ahụ n'anya Anya nke Chineke Ụdị na aka na mkpịsị nwa ink; Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya na-acha
22. Anya Chineke maka igbu mmadu ndi mmadu nwere ejiji onk na-acha uhie uhie na-eme ka ha di ebube
Ndị ikom chọrọ ịma ihe magburu onwe ha ga-ahụ Ụdị Anya Chineke maka ndị ikom na-eji ejiji anụnụ anụnụ eme ihe n'elu ogwe aka ha
23. Anya Chineke na-egbuke egbuke na-eme ka mmadụ nwee ihu ọchị
24. Anya Chineke na-egbuke egbuke n'elu ogwe aka dị elu na-eme ka mmadụ na-ele anya
Brown na-ahụ n'anya Anya nke Chineke Ụdị na aka elu; Ejiji egbu egbu a na-acha odo odo na-emetụta akpụkpọ ahụ iji mee ka ha mara mma
ụkwụ akaegwu egwuụmụnne mgbuakwara obimehndi imeweazụ azụNtuba ntughariegbu egbu egbuaka akaEgwu ugoenyi kacha mma enyiudara okooko osisirip tattooszodiac akara akaraegbugbu maka ụmụ agbọghọokpueze okpuezemma tattoosọnwa tattoosaka mma akaAnkle Tattoosna-egbu egbuagbụrụ eboegbu egbu maka ụmụ nwoken'olu oluegbu egbu diamondakpị akpịndị mmụọ oziegbu egbu osisi lotusegbu egbuọdụm ọdụmenyí egbu egbuUche obiima ima mmadi na nwunyendị na-egbuke egbukekoi ika tattoonnụnụegbu egbu mmiriegbu egbu okpuGeometric Tattoosngwusi pusiaka akaakara ntụpọegbu egbu hennaegbugbu egbugbuechiche egbugbuegbu egbu ebighi ebiỤdị ekpomkpaarịlịka arịlịkana-adọ aka mma